Paulo Dybala: “Waxaan dhamaanteen garab istaagi doonaa Lionel Messi si uu ugu guuleysto koobka aduunka” – Gool FM
(Argantina) 28 Maajo 2018. Xidiga kooxda Juventus iyo xulka qaranka Argantina ee Paulo Dybala ayaa wuxuu xaqiijiyay in dhamaan ciyaartoyda xulka qaranka ay diyaar u yihiin in ay garab istaagaan Lionel Messi si uu ugu guuleysto koobka aduunka ee 2018.
“Waxaan dhamaanteen dooneynaa inaan ku caawino Messi inuu ku guuleysto Koobka Adduunka”.
“Waxaan heysanaa riyo weyn, sababtoo ah waxaan heysanaa ciyaartoyga ugu fiican taariikhda ee Lionel Messi, riyadii Koobka Adduunka waa riyo inagu weyn dhamaantayada”.
“Inaan tababar la sameeyo Lionel Messi, isla markaana aan maalin kasta arko ayaa ah arin cajiib ah oo aan wax badan ka baranayo ee la mid ah Lio”.
Argentina ayaa ciyaari doonta kulankeeda ugu horeeya ee Koobka Aduunka maalin Sabti ah 16-ka June waxayna la ciyaari doonaan Iceland waxayna sidoo kale kula ciyaari doonaan group-kan xulalka Croatia iyo Nigeria.
Sergio Ramos oo dib u weeraray difaaca Atletico Madrid Juanfran, kadib marka ay ku guuleysteen Champions League